Macaamiisha YouTube ee bilaashka ah | Iibso macaamiisha YouTube
Soo Iibso Soo-Jeedinta YouTube-ka
Adeegga #1 si aad ugu koraan kanaalkaaga YouTube dadka dhabta ah, si dhakhso ah!
SubPals waa madal kobcinta macaamiisheeda YouTube oo bilaash ah oo loogu talagalay in lagu bilaabo kanaalkaaga iyada oo la adeegsanayo ka-qaybgalka dadka dhabta ah! Hadda bilow safarkaaga korriinka.
Sifooyinka Muhiimka ah Adeegyadeena Macaamiisha YouTube-ka
SubPals waxay bixisaa shabakad hal abuur leh oo kuu oggolaaneysa inaad hesho 10 macaamiilyaal cusub oo YouTube ah oo bilaash ah 12-kii saacadoodba! Adeeggu waa bilaash oo waxaa ku jira qaar ka mid ah xulashooyin aad u qiimo badan oo la awoodi karo oo loogu talagalay kuwa doonaya xitaa macaamiilleyaal badan oo maalinle ah.
SubPals waxaa loogu talagalay in ay u fududaato sida bini-aadamka u suurtagasho! Waqtigaagu waa muhiim waana fahansanahay taas, sidaas darteed waxaan u soo saarnay shabakada si aan ku siino 10 + macaamiisha YouTube-ka ah ee bilaashka ah dhowr daqiiqo oo keliya waqtigaaga.
Shabakadayada bilaashka ah ee bilaashka ah waxay bixisaa isweydaarsiga udhaxeeya adiga iyo kuwa kale ee YouTubers oo raadinaya inay kordhiyaan macaamiishooda, marka waxaad ka heli doontaa rukumada milkiileyaasha kale ee YouTube-ka ah. Waa hab wax ku ool ah oo lagu helo macaamiil badan oo YouTube ah!
Ammaanka & Amniga
Adeegsiga SubPals si loo helo rukumadayaasha YouTube-ka ah ee bilaashka ah waxay 100% aamin u yihiin koontadaada YouTube. Waxaad dareemi kartaa kalsooni aad ku ogaato in shabakaddeena ay amaan u tahay in la isticmaalo oo aamin ah marwalba.
Natiijooyinka Aad arki Karto
Markaad dhaqaajiso qorshe bilaash ah ama lacag bixisay kanaalkaaga, waxaad arki doontaa tirinta tiriyaha kanaga ah oo bilaabaya inay isla maalintaas sii kordhaan! Qorshe kastaa wuxuu bilaabaa si dhakhso leh u shaqeynta si loo kobciyo aaminkaaga iyo muujinta kanaalkaaga.
Kooxdayada saaxiibtinimo ayaa halkan u jooga inay caawiyaan! Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay in lagaa caawiyo wax kasta, waxaan nahay imayl uun. Markii aad nala soo xiriirto, waxaad had iyo jeer filan kartaa jawaab celin waqti ku habboon.
Talaabooyin Fudud oo Aad Ku Heli Karto Bixiyeyaasha Bilaashka ah
60 Daqiiqo Kadib, Waad Dhameysay!
Fariiso oo Hesho Macaamiishaada Bilaash ah
Waxaan Rabaa Macaamiisha Bilaashka Ah Hada
10 ka mid ah Faa'iidooyinka ugu Muhiimsan ee Macaamiilyaasha Bilaashka ah ee YouTube-ka ah
Waxyaabaha ugu wanaagsan nolosha waa lacag la'aan; iyo korodhka warbaahinta bulshada, maxaa ka wanaagsan macaamiisha YouTube-ka bilaashka ah? Hagaag, waxaad u badan tahay inaad magacaabi karto ugu yaraan dhowr waxyaalood oo ka wanaagsan; laakiin ujeedadu waxay tahay, raacitaankaaga baraha warbaahinta bulshada, sida YouTube, ayaa si aad ah muhiim ugu ah adduunka maanta.
“YouTube wuxuu leeyahay waxyaabo aad u wanaagsan. Runtiina wax bay u leedahay qof walba. Dadkuna way ii yimaadaan markasta waxayna igula hadlaan sida YouTube ay noloshooda u badashay, sida ay ugu suurto gashay inay bartaan wax aysan u maleynayn inay baran karaan. ”
Shan bilyan. Taasi waa tirada fiidyowyada YouTube -ka ee lagu wadaagay goobta ilaa maanta. Tan iyo markii la aasaasay Febraayo 14-keedii, 2005, madal-wadaagga caanka ah ee wadaagga fiidiyaha ayaa sii waday soo jiidashada isticmaaleyaasha cusub ee soo saara waxyaabaha ku jira xawaare cajiib ah. Xiriirka jaceylka adduunka ee YouTube ma ahan maxaa yeelay waxaa la abuuray Maalinta Jacaylka, si kastaba ha ahaatee. Way fududahay in la fahmo sababta ay u noqotay aalad lama huraan u ah adeegsadayaasha inay ku xirnaadaan oo xog ogaadaan.
Xaqiiqdii, marka loo eego Xarunta Cilmi-baarista Pew, inka badan 20% dadka isticmaala qaangaarka ah waxay muujiyeen inay u adeegsadaan YouTube-ka si joogto ah wararka. Taasi waxay ka dhigeysaa Youtube bogga labaad ee warbaahinta bulshada ee loo adeegsado wararka, gadaal Facebook, halkaas oo boqolkiiba 43% dadka isticmaala waaweyn ay sheeganayaan inay helaan wararkooda. Waxa intaa ka badan, sida laga soo xigtay Omnicore, 75% millennials waxay doorbidayaan daawashada fiidiyowyada YouTube-ka inay daawadaan telefishanka dhaqanka.
Maxuu yahay, halka dadku ka helaan wararkooda, inay la xiriiraan kuwa raacsan YouTube-ka bilaashka ah? Hagaag, waa fikrad fiican inaad lahaatid faham buuxa oo ku saabsan saameynta ay YouTube ku leedahay dhaqankeenna, iyo sida dhaqankeennu u qaato macluumaadka. Aqoontaas, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku dhaadhiciso dhagaystayaashaada wax ku ool ah.
Tirakoobka ayaa cadeynaya in dad aad u tiro badan ay u jeesteen bogagga sida YouTube si ay wax uga ogaadaan waxa adduunka ka dhacaya, laakiin halkaas kuma joogsan. Isticmaalayaasha YouTube-ka waxay bartaan nooc kasta oo macluumaad ah oo ku saabsan waxkasta oo ka socda sida loo rakibo qalabka guryaha fudud, iyo sida-loo-qurxiyo. Laakiin hadda, in ka badan sidii hore, isticmaaleyaashu waxay daawanayaan fiidiyowyada YouTube-ka si ay wax uga bartaan ganacsiyada iyo magacyada.
Waa meesha ugufiican ee lagu hormariyo shirkadaada. Sheeko-sheegashada fiidiyowga waxay bixisaa iskudhafyo isku dhafan oo macluumaad iyo madadaalo ah, fiidiyowguna waxay soo bandhigaan macluumaadka ugu badan waqtiga ugu gaaban. Adigoo adeegsanaya YouTube-ka, waxaad ku tusaysaa daawadayaashaada muuqaal qaas ah dhaqanka shirkadaada iyo wadaagida macluumaadka ay badanaaba ka heli doonin xayeysiiska ama xayeysiiska dijitaalka ah.
In kasta oo YouTube ay ku fiican tahay isku xidhka macaamiisha jira iyo kuwa iman kara, waxaad u baahan tahay inaad u diyaar garowdo tartanka. Qiyaastii boqolkiiba 63% ganacsiyadu waxay horey ugu soo darsadeen YouTube istiraatiijiyadooda suuqgeynta, tiradaasina wey sii socon doontaa oo kaliya.
Macluumaad fara badan ayaa lagu qoraa bogga isla markiiba, waa wax aan macquul aheyn in la soo baxo. Ku dhawaad ​​300 saacadood oo fiidiyow ah ayaa la soo geliyaa daqiiqad kasta. Haddii aad xisaab sameyso, taasi waa 400,000 saacadood maalintii, iyo ku dhawaad ​​158,000,000 saacadood sanadkii. Waa inaad ku qaadataa 18,000 oo sano inaad daawato fiidiyaha YouTube-ka si aad ula xisaabtamto 2018 oo keli ah. Soo hel sawirka?
Waad aragtaa halkaan waxaan ku wadno; ka akhriso siddeedda arrimood ee ugu muhiimsan si aad macaamiisha bilaashka ah ugu hesho YouTube-ka.
Dhis waxbadan oo soosocda
Sababta ugu horreysa ee lagu helayo macaamiil-bixiyeyaasha bilaashka ah ayaa ah mid toos ah oo toos ah — waxaad rabtaa inaad dhisto kanaal wax ku ool ah oo soo socda! Haddii aad tahay isticmaale cusub, ama aad hore u leedahay kanaal YouTube ah laakiin aad dhibaato ku qabtid helitaanka jaadka, macaamiillo dheeraad ah ayaa qaar ka mid ah waxay u mari karaan jid dheer si ay u horumariyaan ka-qeybgal xoog leh iyo soosocod caafimaad leh.
Algorithm-ka YouTube wuxuu doorbidayaa kanaalka kuwa badan oo ka mid ah macaamiisha ayagoo soo bandhigaya waxyaabaha ay ka kooban yihiin dhagaystayaal ballaaran. Tani waxay abuurtaa saameyn kubbad-baraf ah maxaa yeelay dadka badan ee arkaa kanaalkaaga, ayay aad ugu dhowdahay inay iyaguna iska diiwaan geli doonaan.
Waxaad dooneysaa in lagu ogaado bogagga kale ee warbaahinta bulshada
Inta badan baraha warbaahinta bulshada ee kuyaala banaanka ayaa lagu xiriirin karaa isticmaale kasta. Tani waxay ka dhige mid aad u sahlan in la wadaago waxa ka jira aagyada oo dhan, isla markaana si ballaadhan loogu kordhiyo tirada dhagaystayaashaada. Haddii fiidiyowgu caan ku yahay YouTube-ka, waxaa jira fursad aad u sarreysa oo ay iska-diiwaangelintu ku soo dhejin karaan fiidiyowga akoonnada kale ee warbaahinta bulshada. Macaamiil badan oo YouTube ah waxay ka dhigan yihiin dad badan oo ka caawin kara inay ku faafi karaan fiidyowyadaada aaladaha kale. Si dhakhso ah, fiidiyowgu wuxuu umuuqdaa meelkasta, oo xitaa waad istaagtaa fursada inaad virus ku socoto.
Waa riyo kasta oo YouTuber ah. Ku faafo fayraska, ka dhigo tusmadaada malaayiin, waxaadna hoos ugu dhacdaa taariikhda YouTube-ka fiidiyowyada caanka ah ee waqtigeenna sida "Charlie Bit My Finger" iyo "Harlem Shake." Waxay u egtahay in kaliya "15 daqiiqo oo caan ah," laakiin xaqiiqda, macaamiil badan ayaa daawada alaabada waxayna sameeyaan go'aano iibsi kadib markay ka bartaan baraha bulshada.
Mararka qaarkood waa dahsoon sababta waxyaabaha qaarkood ay u noqdaan viral, laakiin guud ahaan marka la hadlo, fiidiyowyo tayo sare leh oo leh waxyaabo dilaa ah ayaa u muuqda in la dareemo. Laakiin, si kasta oo si farshaxanimo leh loo ururiyey fiidyahaaga, haddii aadan haysan tiro ku habboon oo macaamiisha ah, waa shaki in qof kastaaba arki doono fiidiyowyadaada. Helitaanka taageerayaal badan waxay la macno tahay in kanaalkaaga YouTube uu ka soo muuqan doono YouTuber ka badan "waxyaabaha la soo jeediyay." Saamayntaas kubbadda barafka ayaa kacaysa, ka hor intaadan ogaanin fiidiyowyada summadaada waxaa adduunka oo dhan la wadaagaya malaayiin qof. Helitaanka macaamiisheeda YouTube lacag la'aana waa kaliya talaabada ugu horeysa. Haddii aad go'aansato inaad iibsato macaamiisha YouTube, hubi inaad ka iibsatid shirkad sumcad leh oo shaqaynaysay ugu yaraan dhowr sano oo sumcad ku leh bixinta adeegyo tayo sare leh oo la isku halayn karo.
Ka soo kabashada dhowr fiidiyow oo aan la isticmaalin
Warbaahinta bulshada ayaa weyn maxaa yeelay waxay cod siisaa ku dhawaad ​​qof kasta oo dunida jooga. Qof kasta fikradiisa ayuu la wadaagi karaa taabashada batoonka. Laakiin marka la eego waxa wanaagsan, waxa kale oo yimaadda kuwa xun, isla markaana adeegsadayaashu waxay awood dheeraad ah u leeyihiin magacyada xun-xun adduunka oo dhanna dhagaystayaasheeda. Haddii aad heshay qaar ka mid ah faallooyinka xun ee waxyeelleeyay qiimeyntaada fiidiyowgaaga, kordhinta tirada macaamiishaada waxay gacan ka geysan doontaa ka hortagga tan.
Waxaa lagu magacaabaa caddeynta bulshada, waana sida aadanuhu u bartaan waxa la sameeyo iyo waxa aan la sameynin. Dadku waxay u janjeeraan inay jeclaadaan shay ay u malaynayaan dadka kale inay jecel yihiin. Ka soo horjeedka waa run sidoo kale; qofku wuxuu u xukumi doonaa shay sidii wax xun ama wax aan la jeclaan karin haddii ay arkaan dad kale oo aan ogolayn. Macaamiisha YouTube-ka waa sida codadka aad adigu u aragto, uga fikir inay yihiin dib-u-eegis wanaagsan. Xitaa haddii kanaalkaagu leeyahay fiidiyowyo yar yar oo aan la jeclaan karin laakiin leh tiro badan oo macaamiisha ah, adeegsadayaasha kale ayaa u qaadan doona in sumaddaadu caan ku tahay, ayna u badan tahay in ay cafiyaan dhowr nacayb halkan iyo halkaas.
Kordhinta sharcinimada astaantaada
Jidadka YouTube-ka ee leh macaamiil tiro yar waxay umuuqdaan inay yihiin kuwo cusub. Ganacsiyada cusub ayaa wali soo jiidata macaamiisha sababta oo ah qof kastaa wuxuu rabaa inuu noqdo kan ugu horreeya ee raadiya boos cusub “it”. Laakiin, ka dib marka boodhku dego haddii aadan dhisin liis gareeye weyn, dadku waxay moodayaan inay wax ka khaldan yihiin astaantaada. Hadaad hesho helitaanka YouTube-ka bilaashka ah, sumaddaadu waxay umuuqataa inay muddo soo jirtay si ay magac fiican u samayso lafteeda. Tani waxay dhisi doontaa aaminaadda macaamiishaada waxayna kordhin doontaa fursadahaaga inaad alaabada badan ka iibiso ganacsigaaga.
YouTube-kaaga soo socda ayaa u baahan in la daryeelo
Sida cilaaqaad kasta, dhisida warbaahinta bulshada ee caafimaad ee soo socota waa balan qaad weyn. Caadi ahaan, meheradahu waxay lahaan doonaan shaqaale u go'ay oo maareeya xisaabaadka warbaahinta bulshada. Laakiin dadkaasi si bilaash ah uma shaqeeyaan. Ganacsiyada ayaa ku dhameysta kumanaan kun oo doolar si ay u daboolaan mushaaraadka sanadlaha ah iyo manfacyada, shirkadaha cusub ee leh xuduudaha khafiifka ah inta badan ma sii wadi karaan.
Joogtaynta joogitaanka warbaahinta bulshada ee wax ku oolka ah waa shaqo waqti-buuxa ah maxaa yeelay kuma filna in si toos ah loogu soo diro fiidyowyada YouTube-ka haddii aad rabto in lagu ogaado. Waxay u baahan tahay waqti iyo tamar si firfircoon loogu dhejiyo, la wadaago, iyo faallooyinka, sida, aragtida, iyo la shaqeynta dhagaystayaashaada, ugu dhawaan sidii in meheraddaadu ay ahayd qof dhab ah. Laakiin waa xiriirinta shaqsiyadeed ee YouTube ka dhigaysa aalad qiimo leh! Su’aal kama taagna in ganacsigaagu u baahan yahay inuu ahaado YouTube; kaliya waa arin ku saabsan sida aad u maareeynaysid masuuliyada.
Waad iskalaan kartaa mashruuca weyn, laakiin sidoo kale waxaad leedahay baahiyo badan oo ganacsi oo kale oo u baahan feejignaantaada. Helitaanka macaamiisha YouTube-ka ah ee bilaashka ah waxay qaadataa culeyska dhismaha jiritaanka YouTube-ka ee xoqista garbahaaga. Waxaad ku nasan kartaa si sahlan adoo garanaya in kuwa raacsan la daryeelo oo aad ku laaban karto diiradda saareysa hindisayaasha ganacsi ee muhiimka ah.
Muuqaal sare ugu muuqan raadinta
Waxaan horeyba uga wada hadalnay sida 'algorithm-ka' ee YouTube-ka u doorbido kanaalka kuwa macaamiisha badan leh anagoo ku tusineyna dhagaystayaal ballaaran. Qayb ka mid ah tani waxay la xiriirtaa halka ay khadadkaani ku jiraan qiimeynta. Waa sidan oo kale, aynu nidhaahno waxaad leedahay makhaayad loo yaqaanay karinta kuleylka aadka u daran. Haddii khadkaaga 'meheradda' YouTube ka yar ay ku yaallo macaamiisha ka hooseysa malqacadda dufan leh, fiidiyowyadoodu waxay u muuqan doonaan kuwo ka sareeya raadintaada xitaa xittaa haddii saladkaaga xilliga qaboobaha uu u rogi karo kan ugu daran ee carbisvores. Marka, si kasta oo ay ufiican tahay waxyaabahaaga, iyadoo tiro yar oo macaamiil ah aad qatar ugu jirto inaad ganacsi kaaga lunto astaan ​​ka sii yar.
Waxaad si adag ugu soo shaqeysay meheraddaada, waxaadna dooneysaa inaad hubiso in lagu soo ogeysiiyo. Helitaanka macaamiisha YouTube-ka waxay gacan ka geysan doontaa xaqiijinta in sumcaddaadu ay ku soo muuqato liiska ugu sareeya liiska raadinta, iyo in waxa ku jiraagu ka badan yahay tartanka.
Waa khiyaano caan ah oo ay adeegsadeen kumanaan koonto xisaabaad
YouTube-ka ayaa ah aalad qiimo u leh suuqleyda. Qaadashada rukumada kanaalka ayaa la mid ah inay dadku isqortaan si ay u eegaan badeecadaada maalin kasta. Kaliya maahan YouTube inay qayb muhiim ka tahay istiraatiijiyad kasta oo suuqgeyn laakiin helitaanka Macaamiisha YouTube-ka ah ee bilaashka ah waa mid ka mid ah sirta xafidan ee warshadaha. Waxaad la yaabi doontaa tirada xisaabaadka ay ku jiraan macaamiil aan dabiici ahayn iyo kuwa raacsan. Moodooyinka, darawalada gawaarida, xitaa siyaasiyiinta, ayaa dhamaantood ka hela macaamiil-yada YouTube-ka xisaabaadkooda waxayna daawanayaan kanaalka caanka ah ee telefishanka si sax ah hortooda.
Intooda badan waxaan ka helnay deyn Ad bilaash ah Facebook. Waa isku mid. Ka fikir inaad ka dhigatid kuwa raacsan sida kor u qaadista boostada Facebook, labaduba waa qaabab la taaban karo oo lagu kordhiyo macaamiishaada. Farqiga kaliya ee jira ayaa ah, kor u qaadista boggaga Facebook iyo bogag kale waa qatar maxaa yeelay lama dammaanad qaadi karo tiro cayiman oo raacsan ama xitaa hawlgal joogto ah.
Kordhinta dakhliga ganacsiga
Sida ganacsi kasta, waxaad dooneysaa inaad kordhiso safkaaga hoose. YouTube waa masraxa ugu wanaagsan ee loogu badalayo iibsadeyaasha macmiisha noloshooda asaga oo la wadaagaya fiidiyowyo ku mashquulsan astaantaada. Waxay ku dhamaanaysaa tan. Macaamiisha bilaashka ah ee YouTube, waxaad ku dhisi kartaa wax badan oo muhiim ah ganacsigaaga soo socda. Laga soo bilaabo halkaas, fiidiyowyadaada waxay ku faafi karaan boggag kale sida Facebook, waxaadna u taagan tahay fursad aad ku socoto fayras; iyo u soo bandhigista astaantaada malaayiin macaamiil ah. Waxaan sidoo kale eegnay faa'iidooyin kale sidoo kale, laakiin sabab kasta oo ku kalifta ayaa ah in kordhinta tirada macaamiishaada YouTube ay kuu horseedi doonto dakhli ganacsi oo kordha.
Hello … Waa bilaash!
Fursadaha ayaa ah cinwaanka maqaalkan oo xiiseynaya danahaaga. Macaamiisha bilaashka ah ee YouTube-ka ayaa ah helitaan dhif ah, laakiin waxaa jira shirkado kuwaas oo siinaya macaamiisha! Kuwani maaha uun bots-gareyn ku kiciya koontadaada; iyagu waa isticmaaleyaal dhab ah oo gacan ka geysan kara kor u qaadida tirada macaamiishaada isla markaana ka ganacsata halkaas.
Haddaba maxay tani micnaheedu tahay ganacsigaaga?
Waxa ay Susan Wojcicki tidhi shaki la’aan waa run; YouTube qof walba wax buu u hayaa. Ganacsi ahaan YouTube, si kastaba ha noqotee, kuma filna in wax loo noqdo qof , waa inaad ku dadaashaa inaad wax u noqoto qof kasta . Sidii la yaab leh oo ay u dhawaaqi karto, YouTube wuxuu caan ka noqday telefishanka shabakadda, iyo xitaa fiilada. Isticmaalayaashu waxay dareemaan xiriir gaar ah oo ka dhexeeya aaladda iyo kanaalka ay raacaan sababtoo ah muuqaal dhow ah waxay siineysaa iyaga nolol-maalmeedka buundooyinka. Helitaanka macaamiisha YouTube-ka ah ee bilaashka ah ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu boodi karo-jiritaanka joogitaankaaga YouTube-ka loona furi karo albaabka guusha ganacsiga.
Soo Kordhso Macaamiishaada bilaashka ah ee YouTube oo bilaw safarkaaga caannimada YouTube maanta!
27th Juun 2022
Talooyin ku saabsan Abuuridda Fiidyowyada Daba-Dheer ee Saamaynta leh ee YouTube-ka
Hubaal, YouTube Shorts ayaa mowjado ka samaynaya warbaahinta bulshada. Laakiin ma ogtahay in dad badani ay si gaar ah u daawadaan fiidiyowyada dabada-dheer? Kuwani waa fiidiyowyo dhaadheer oo YouTube ah,...
20th Juun 2022
Hagahaaga Bilaabida Kanaalka Shirkadda YouTube
Kanaalka shirkadda YouTube waa kanaalka YouTube ee ganacsiga. Inkastoo YouTube uusan kala sooceynin kanaalada gaarka ah iyo kan shirkadda, waxaa jira dhowr waxyaalood oo aad sameyn karto...
Immisa Tag ayaa ay tahay inaad u isticmaasho muuqaal YouTube ka wanaagsan?
YouTube ma aha oo kaliya goob fiidiyoow ah oo la sii daayo – waxa kale oo ay noqotay mishiin wax raadiya. Dhab ahaantii, madal ay leedahay Google-ku waa kan labaad ee Google marka la eego raadinta...
Halkan SubPals, waxaanu ku hanweynahay adeeg gaar ah iyo qiimo jaban. Kaliya ha u qaadan ereygayaga - ka eeg faallooyinka macaamiishayada hoos.
Soo gudbi dib u eegistaada
Waxaan ahay abuure wax ka kooban, runtii waa la caawiyay sababtoo ah Subpals waxay ku dartay macaamiisheeda kanaalkayga 12 saacadoodba mar
Mareegtan waxay u fiican tahay soo koraya youtubers kuwaas oo u baahan dhiirigelin. Waxaan ku bilaabay 80 macaamiil oo hadda waxaan haystaa 500.
Waxaan raadinayay tabo yar oo aan ku kasbado macaamiisheeda kanaalkayga YouTube ee internetka markii aan ku turunturooday SubPals oo aan runtii wax yar ka sheegayay, anigoo u malaynaya inay tahay khiyaano. Nasiib wanaag ma aysan ahayn oo waxaan awooday inaan helo toban macaamiil oo wanaagsan dhowr daqiiqo gudahood! Waxaan aad ugu talinayaa, intaa waxaa dheer waxaad isticmaali kartaa adeegyadooda lacag la'aan hal mar maalintii;)
Websaydh weyn, waxaad helaysaa rukunno bilaash ah. Oo iyaduna ma laha wax fayras ah. Aad u cajiib ah. Eeg mareegtan HADDA!
Adeeg aad u wanaagsan oo qiimo sare leh, jecel qaabka ku-saleysan is-diiwaangelinta. Aragtida iyo subsyadu waa organic.
Waxay qaadataa ku dhawaad ​​nus saac si aad u hesho qorshaha bilaashka ah, kaas oo ku siinaya qadar min 10sub ah 12-kii saacba, in kasta oo aad u baahan tahay in aad gacanta ku dhaqaajiso. Waxtar u leh dadka cusub ee raba inay koraan kanaalka yt. Goobtu way fududahay in la dhex maro.
Dhammaan qaybaha Youtube-ka ee mareegaha hoose ee jira, Subpals waa inuu noqdaa kuwa ugu fiican, 12 saacadoodba mar waxaad awood u yeelan kartaa 10 macaamiil taas oo ah mid cadaalad ah, hubaal dadka qaarkiis way iska bixi doonaan taas oo nasiib daro ah wax mareegaha noocan oo kale ah aysan ka hortagi karin. , Waxaan hore u isticmaalay sub pals iyo waayo-aragnimadayda, waa habka ugu wanaagsan ee lagu kasbado macaamiisha YouTube.
- Dayaxa X.
Si la yaab leh ayaa heshay subs-yo badan iyo kuwa jecel ma rumaysan karaan in goobtan ay dhab ahaantii tahay mid dhab ah laakiin waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan.
- Aadam S.
Sida ugu wanaagsan ugu wanagsan, aad loogu talinayaa qof walba. Isticmaal adeegyadooda, macno ahaan cajiib ah. Waxaan si joogto ah u helayaa subs-ka kanaalkayga..
Habka ugu fiican ee macaamiisha loogu heli karo youtube waxay qaadatay wakhti laakiin waa faa'iido oo way shaqeysaa markaa waxaan ku talinayaa!
Macaamiishu waa dhab taas oo aan ka helno subpals.com. Waxaan kugula talin doonaa inaad ka shaqeyso subpals.com xayeysiinta kanaalka YouTube. Mahadsanid
adeeg wanaagsan. Qorshaha bilaashka ah wuu shaqeeyaa
Adeeg aad u wanaagsan oo caawiya korriinka kanaalkayga. Waxaa jira deeqo todobaadle ah oo badan oo runtii cajiib ah.
Kanaalka youtube-ka ee JE Imposters wuxuu ka helay macaamiil aad u badan SubPals! Kaliya hal usbuuc ayaan dhajiyay waxaanan haystaa sida 30 subs mar hore! Taas oo kale waa yaab goobtani runtii way shaqeysaa waxaana aad ugu talinayaa
Aad u fiican, aad ayaan ugu faraxsanahay in ay dhab ahaantii samaysay waxa ay horumarinayso! Waxay ku siinayaan subs muddo daqiiqado ah waxayna u muuqdaan kuwo la isku halayn karo
- aamiin a.
madal weyn si gaar ah bilowga ah!
Aad baan u jeclahay degelkan. Waxaad heli kartaa macaamiil bilaash ah oo kaliya si aad u jeclaato oo aad u noqoto dadka qaar
Tani aad bay ammaan u tahay in la isticmaalo maadaama aan isticmaalayey muddo laba toddobaad ah oo aan wax dhibaato ah la kulmin. marka waxaan u maleynayaa in dadka isku dayaya inay xoogaa dhaqso u koraan waa inay tagaan oo isticmaalaan boggan
Aad u fiican, 100% lagu taliyay, si fiican u shaqeyso, haddii aad rabto inaad korto, kani waa degelkaaga. Waxaan ku talinayaa youtube
- Muuse R.
Websaydhkii ugu fiicnaa abid! Mar kale ayaan isku dayi lahaa! Sida haddii aad u baahan tahay caawimo kanaalkaaga, tani gabi ahaanba way ku caawin doontaa!
Waxaan dareemayaa farxad ka dib markii aan ku soo biiray website-kan. Waxaanan idinkula taliyay dhammaantiin inaad halkan ku soo biirtaan.
Kani waa app cajiib ah, waxa uu ku siinayaa subs bilaash ah! Dhab ahaantii way ku talinayaan iyaga sababtoo ah kuwan hoosaadyadu waxay noqon karaan kuwo faa'iido leh.
Aad u fiican! Waxaad helaysaa ku dhawaad ​​​​15 macaamiil mar kasta oo kaliya ayaa lumisay ilaa 3. Waxaan ka baxay 9 ilaa 30 in ka badan 2 maalmood gudahood!
Ku kori kanaalkaaga si sahal ah adiga oo kaliya la wadaag dadka! Waxaan aad ugu talinayaa inaad tan tijaabiso! Ma qoomamayn doontid oo goobtani waxay leedahay adeeg aad u wanaagsan. Haddii aad halkan ka iibsato rukunka sida ganacsiga ama wax kale, waxaad caan ku noqon doontaa waqti gaaban gudahood ...
Service Qiimeynta Kanaalka YouTube ($ 120)
Service 1 YouTube Video SEO ($ 30) 3 YouTube Videos SEO ($ 80) 6 YouTube Videos SEO ($ 150) 12 YouTube Videos SEO ($ 280)
Service 1 Naqshadeynta Banner Channel ($ 80) 1 Naqshad Fiidiyowga Fiidiyowga ah ($ 25) 3 Naqshad Fiidiyowga Fiidiyowga ah ($ 70) 6 Naqshad Fiidiyowga Fiidiyowga ah ($ 130)
Ku biir in ka badan 1 Milyan YouTubers kuwaas oo si firfircoon ugu ololeeya kanaalkooda macaamiisha YouTube-ka ee bilaashka ah!
Kusoo hel tartan aad la gasho macaamiisha YouTube-ka ah ee bilaashka ah adigoo adeegsanaya shabakadda gudbinta SubPals!
... iyo qaar kaloo badan!
Xuquuqda daabacaadda © 2022 SubPals (subpals.com). All Rights Reserved. Khariidadda bogga
Koorsooyinka Tababarka Fiidiyaha
Heshiiska Barnaamijka Isku-xidhka
Sida loola tacaalo faallooyinka spamka ee Koontadaada YouTube?
Sheegashada Xuquuqda Daabacaada YouTube vs. YouTube Strikes